Ababhalisile bakaYouTube basimahla | Thenga ababhalisile bakaYouTube
Iinkonzo zethu zeNtlawulo yaNyanga le
Inkonzo ye-#1 yokukhulisa isitishi sakho sikaYouTube Ngabantu bokwenyani, ngokukhawuleza!
I-SubPals liqonga lokukhula lababhalisile beYouTube lasimahla eliyilelwe ukuqala itshaneli lakho ngokuzibandakanya nabantu bokwenyani! Qala uhambo lwakho lokukhula ngoku.
Amanqaku aphambili enkonzo yethu yokuBhalisela iYouTube
I-SubPals ibonelela ngothungelwano oluyilayo oluvumela ukuba ufumane ababhalisile be-YouTube abasimahla nabayi-10 rhoqo iiyure ezili-12! Inkonzo ayihlawulelwanga kwaye ibandakanya ezinye iindlela ezinokuhlawulelwa ezihlawulelwayo kwabo bafuna ababhalisi bemihla ngemihla.
I-SubPals yenzelwe ukuba ibe lula njengoko kunokwenzeka ebantwini! Ixesha lakho libalulekile kwaye siyayiqonda loo nto, ngoko ke siphuhlise inethiwekhi ukukunika i-10 + ababhalisile be-YouTube abasimahla kwimizuzu embalwa yexesha lakho.
Inethiwekhi yethu yasimahla inikezela ngotshintshiselwano phakathi kwakho nezinye i-YouTubers ezijonge ukukhulisa ababhalisile, ke uya kufumana ubhaliso kwabanye abanini besitishi se-YouTube. Yindlela esebenzayo yokufumana ababhalisi beYouTube!
Sebenzisa ii-SubPals ukufumana ababhalisi be-YouTube simahla yi-100% ikhuselekile kwiakhawunti yakho yeYouTube. Unokuziva unethemba lokuba inethiwekhi yethu ikhuselekile ukusebenzisa kwaye ikhuselekile ngamaxesha onke.
Xa wenza ukuba isicwangciso sakho simahla okanye sihlawulelwe isikhululo sakho, uya kubona ukubalwa kwesitrato sakho ukuqala kwakho kukhula kwangolo suku! Isicwangciso ngasinye siqala ukusebenza ngokukhawuleza ukukhulisa ukuthembakala kwejelo lakho kunye nokuchazwa.
Iqela lethu elinobubele lilapha ukunceda! Ukuba unemibuzo okanye ufuna uncedo ngayo nayiphi na into, siyi-imeyile nje. Xa unxibelelana nathi, unokuhlala ulindele impendulo ngexesha elifanelekileyo.
Amanyathelo alula ukufumana ababhalisi bakaSimahla
Bhalisa kunye neeVidiyo
Imizuzwana ye-60 emva kwexesha, Uyenzile!
Hlala umva kwaye uzuze ababhalisi bakho Simahla
Ndifuna Ababhalisi bakaSimahla ngoku
I-10 yeziBonelelo ezibaluleke kakhulu zababhalisi bakaSimahla beYouTube
Izinto ezintle ebomini zikhululekile; kunye nokunyuka kweendaba zosasazo, yintoni elunge ngakumbi kunababhalisi beSimahla bakaYouTube? Kulungile, ungabiza okungenani izinto ezimbalwa ezingcono; kodwa inqaku kukuba, ukulandela kwakho kumasayithi eendaba ezentlalo, njengeYouTube, kuye kwabaluleka kakhulu kwihlabathi lanamhlanje.
"I-YouTube inomxholo omkhulu kakhulu. Kwaye inento kuye wonke umntu. Kwaye abantu beza kum ngalo lonke ixesha bathetha nam ngendlela iYouTube ebutshintshe ngayo ubomi babo, ukuba bakwazi njani ukufunda into ababengayicingi ukuba bangayifunda. ”
Iibhiliyoni ezintlanu. Lelo linani leevidiyo zeYouTube ekwabelwana ngazo kwisiza ukuza kuthi ga ngoku. Ukusukela oko yasekwa nge-14 kaFebruwari, 2005, iqonga lokwabelana ngevidiyo eliqhubayo liqhubekile nokutsala abasebenzisi abatsha abavelisa umxholo ngesantya esimangalisayo. Ukuthandana kwehlabathi kunye ne-YouTube ayisiyiyo ngoba yadalwa ngoSuku lweValentine, nangona kunjalo. Kulula ukuqonda ukuba kutheni esi sisixhobo esibalulekileyo sokuba abasebenzisi bahlale benxibelelana kwaye bahlale benolwazi.
Ngapha koko, ngokweZiko loPhando lwePew, ngaphezulu kwe-20% yabasebenzisi abadala babonise ukuba basebenzisa i-YouTube njengomthombo oqhelekileyo weendaba. Oko kwenza i-YouTube ibe kwindawo yesibini esetyenziswa kakhulu kweendaba zendaba, ngasemva kwe-Facebook, apho i-43% yabasebenzisi abadala abathi bafumane iindaba zabo. Yintoni enye into, ngokutsho kuka-Omnicore, iipesenti ezingama-75 ezigidi zikhetha ukubukela iividiyo zeYouTube ukubukela umabonakude wendabuko.
Yintoni, apho abantu bafumana khona iindaba, inento yokwenza nabalandeli bakaYouya basimahla? Ewe, licebo elilungileyo ukuba ube nokuqonda okugcwele kwempembelelo i-YouTube enayo kwinkcubeko yethu, nendlela inkcubeko yethu eyithatha ngayo ulwazi. Ngolu lwazi, uya kuba nakho ukufikelela kubaphulaphuli bakho ngokufanelekileyo.
Izibalo zibonakalisa ukuba baninzi abantu abaphendukela kwiindawo ezifana neYouTube ukuze bafundise malunga nokwenzeka emhlabeni, kodwa akupheli apho. Abasebenzisi be-YouTube bafunda zonke iintlobo zeengcezu zolwazi kuyo yonke into ukusuka kwindlela yokufaka ukulungiswa kokukhanya, kwindlela yokwenza-yokufaka. Kodwa ngoku, kunanini na ngaphambili, abasebenzisi babukele iividiyo zeYouTube ukuze bafundele amashishini kunye neempawu.
Yeyona ndawo ifanelekileyo yokwazisa inkampani yakho. Ukubalisa ibali leVidiyo kubonelela ngendibaniselwano elungileyo yolwazi kunye nokuzonwabisa, kwaye iividiyo zizisa olona lwazi kwelona xesha lifutshane. Kwi-YouTube, ufumana ukubonisa abaphulaphuli bakho ukujonga okukhethekileyo kwinkcubeko yenkampani yakho kunye nokwabelana ngolwazi abangayi kulifumana rhoqo ngokushicilela okanye kwintengiso yedijithali.
Ngelixa i-YouTube ilungile ukunxibelelana nabathengi abakhoyo kunye nabanokubakho, kuya kufuneka ulungiselele ukhuphiswano. Zingama-63% amashishini esele zifake i-YouTube kwizicwangciso zazo zokuthengisa, kwaye elo nani liya kuqhubeka nokukhula.
Ulwazi oluninzi luyekiswa sisixhobo ngexesha elinye, phantse akunakwenzeka ukuba ngaphandle. Phantse 300 iiyure ividiyo ilayishwe ngomzuzu. Ukuba wenza imathematics, ingaphezulu kweeyure ezingama-400,000 ngosuku, kwaye phantse iiyure ezili-158,000,000 ngonyaka. Kuya kufuneka uchithe iminyaka eyi-18,000 ubukele iividiyo ze-YouTube ukwenza i-akhawunti ye-2018 kuphela. Fumana umfanekiso?
Uyabona apho siya khona nale; funda ngezona sizathu zibalulekileyo zokufumana ababhalisi basimahla kwiYouTube.
Yakha okulandelayo okulandelayo
Isizathu sokuqala sokufumana ababhalisi basimahla sithe ngqo-ufuna ukwakha ijaneli enkulu elandelayo! Nokuba ungumsebenzisi omtsha, okanye mhlawumbi sele unesitayile seYouTube kodwa unengxaki yokufumana ithambeka, abanye ababhalisile abongezelelweyo banokuhamba indlela ende ukuba bakhule ngokuzibandakanya okuqinileyo kunye nokulandela ngokusempilweni.
I-algorithm ye-YouTube ithanda iziteshi ezinababhalisi abaninzi ngokubonisa umxholo wabo kubabukeli ngokubanzi. Oku kudala umphumo webhola ekhephu ngenxa yokuba abantu abaninzi ababona isitishi sakho, kunokwenzeka ukuba babhalise kwakhona.
Ufuna ukuqatshelwa kwezinye iisayithi zentlalo yoluntu
Uninzi lweewebhusayithi zosasazo lwasentlalweni zinokudityaniswa ngomsebenzisi ngamnye. Oku kwenza ukuba kube lula ukuba babelane ngomxholo kumaqonga onke, kwaye bonyuse ubukhulu babaphulaphuli bakho. Ukuba ividiyo iyathandwa kwi-YouTube, kukho ithuba eliphezulu kakhulu lokuba ababhalisile bayithumele ividiyo kwezinye iakhawunti zemidiya yoluntu. Ababhalisi be-YouTube abangakumbi bathetha abantu abaninzi abanokunceda ekusasazeni iividiyo zakho kwamanye amaqonga. Kungekudala, ividiyo ibonakala kuyo yonke indawo, kwaye ume nethuba lokuya kuba nentsholongwane.
Lonke iphupha lika-YouTuber. Yiya kwintsholongwane, ufumane umxholo wakho ubonwe zizigidi, kwaye uye ezantsi kwimbali yeYouTube kunye neevidiyo ezibonakalayo zexesha lethu ezinje nge "Charlie Bit My Finger" kunye ne "Harlem Shake." Ingabonakala ngathi "yimizuzu eli-15 yodumo," kodwa enyanisweni, uninzi lwabathengi bajonga iimveliso kwaye bathathe izigqibo zokuthenga emva kokufunda ngazo kwimidiya yoluntu.
Ngamanye amaxesha kuyimfihlakalo ukuba kutheni izinto ezithile zihamba ngentsholongwane, kodwa xa sithetha ngokubanzi, iividiyo ezikumgangatho ophezulu ezinomxholo obulalayo zidla ngokuqatshelwa. Kodwa, nokuba zihlanganiswe ngobuchule kangakanani iividiyo zakho, ukuba awunalo inani elifanelekileyo lababhalisile, kuyathandabuzeka ukuba nabani na uya kuzibona iividiyo zakho. Ukufumana abalandeli abaninzi kuthetha ukuba isitishi sakho sikaYouTube siya kuvela "kumxholo ocetyisiweyo" weYouTuber. Ezo ziphumo zebhola yekhephu ziyaqala, kwaye ngaphambi kokuba uyazi ukuba iividiyo zebhrendi yakho zabiwa kwihlabathi liphela zizigidi zabantu. Ukufumana ababhalisile beYouTube simahla linyathelo lokuqala nje. Ukuba uthatha isigqibo sokuthenga ababhalisile bakaYouTube, qiniseka ukuba ubathenga kwinkampani ethembekileyo ebisebenza ubuncinci iminyaka eliqela kwaye inegama lokuhambisa umgangatho ophezulu, iinkonzo ezithembekileyo.
Phila kwakhona kwiividiyo ezimbalwa ezingathandekiyo
Imithombo yeendaba yoluntu intle kuba inika ilizwi phantse kuwo wonke umntu emhlabeni. Nabani na unokwabelana ngombono wakhe ngokucofa iqhosha. Kodwa ngokulungileyo, kuza nokubi, kwaye abasebenzisi banokwazi ngakumbi kwiimpawu zomlomo ombi kunye nehlabathi liphela njengabaphulaphuli babo. Ukuba ufumene ezinye izimvo ezingalunganga ezenzakalise ividiyo yakho, ukwandisa inani lakho lokubhalisa kuya kunceda ukuchasana noku.
Ibizwa ngokuba bubungqina boluntu, kwaye yindlela abantu abafunda ngayo ukuba mabenze ntoni kwaye bangakwenzi ntoni. Abantu batyekele ekuthandeni into abacinga ukuba abanye abantu bayayithanda. Okuchaseneyo kuyinyani kunjalo; Umntu uyakugweba into embi okanye engathandekiyo ukuba babona abanye abantu bengayamkeli. Ababhalisile be-YouTube bafana neevoti ezikuthandayo, cinga ngazo njengophononongo oluqinisekileyo. Nokuba itshaneli yakho ineevidiyo ezimbalwa ezingathandekiyo kodwa inenombolo ephezulu yababhalisi, abanye abasebenzisi baya kucinga ukuba uphawu lwakho luyathandwa, kwaye kunokwenzeka ukuba baxole ukungathandwa okumbalwa apha naphaya.
Yongeza ukuba semthethweni kwesazisi sakho
Iziteshi ze-YouTube ezinababhalisile abambalwa kuphela ezibonakala ngathi zintsha. Amashishini amatsha asaheha abathengi kuba wonke umntu ufuna ukuba ngowokuqala ukufumana le ndawo intsha. Kodwa, emva kokuba uthuli luzinzile ukuba awuzange wakhe uluhlu olukhulu lwababhalisile, abantu baya kucinga ukuba kukho into engalunganga uphawu lwakho. Ukuba ufumana abalandeli bakaYouTube basimahla, uphawu lwakho lukhangeleka ngathi lujikeleze ixesha elide ukuze lizenzele igama elifanelekileyo. Oku kuyakwakha ukuthembana nabathengi bakho kwaye kwandise namathuba okuthengisa ngakumbi iimveliso zeshishini lakho.
Ukulandela kwakho iYouTube kufuneka kukhuliswe
Njengalo naluphi na ulwalamano, ukwakha imithombo yeendaba eluntwini elandelayo kukuzibophelela okukhulu. Ngokwesiqhelo, amashishini aya kuba nabasebenzi abazinikeleyo abalawula iiakhawunti zabo zosasazo lwentlalo. Kodwa aba bantu abasebenzi simahla. Amashishini aphela echitha amawaka eedola ukuhlawula imivuzo yonyaka kunye nezibonelelo, kwaye iinkampani ezintsha ezinamarhamba amancinanana zihlala zingakwazi ukuqhubeka.
Ukugcina ubukho beendaba eendaba obonakalayo ngumsebenzi osisigxina kuba akwanelanga ukuthumela nje iividiyo kwiYouTube ukuba ufuna ukuphawuleka. Ifuna ixesha kunye namandla ukuze uthumele ngenkuthalo, wabelane, kwaye uvakalise izimvo, ezifana, ukujonga, kunye nokuzibandakanya kunye nabaphulaphuli bakho, phantse ngokungathi ishishini lakho ngumntu oqobo. Kodwa lulonxibelelwano lobuqu olwenza iYouTube ibe sisixhobo esibaluleke kangaka! Akukho mbuzo ukuba ishishini lakho kufuneka libekho kwi-YouTube; yinto nje yokuba uza kusingatha njani uxanduva.
Ungathatha iprojekthi enkulu ngokwakho, kodwa ukwanazo nezinye iimfuno zeshishini ezifuna ingqalelo yakho. Ukufumana ababhalisile be-YouTube simahla kuthatha umthwalo wokwakha ubukho bakho be-YouTube ukusuka ekuqaleni amahlombe akho. Unokuphumla ngokulula ukwazi ukuba abalandeli bakho bayakhathalelwa kwaye babuyela ekugxileni kumanyathelo abalulekileyo oshishino.
Inkangeleko ephezulu kwizikhangeli
Sele sithetha malunga nendlela ii-algorithm ezithanda ngayo iziteshi ze-YouTube ezinababhalisi abaninzi ngokuziveza kubabukeli ngokubanzi. Inxalenye yoku inento yokwenza nokuba ezi ziteshi ziphezulu xa kukhangelwa. Inje ngale, masithi ungumnini wevenkile yokutyela eyaziwa ngokupheka iivenkile ezisandula ukwenziwa. Ukuba ishishini lakho i-YouTube ijelo linababhalisi abambalwa kune-spoon yegrisi phantsi kwebhloko, iividiyo zabo ziya kubonakala ziphakamileyo kukhangelo kunolwakho, nokuba isaladi yakho yasebusika inokuguqula olona carnivores luqatha. Ke, akukhathalekile ukuba umxholo wakho ulungile kangakanani, ngenani eliphantsi lababhalisi oqhuba umngcipheko wokuphulukana neshishini kwinqanaba eliphantsi.
Usebenze nzima kwishishini lakho, kwaye ufuna ukuba uqiniseke. Ukufumana ababhalisile be-YouTube kuya kunceda ukuqinisekisa ukuba uphawu lwakho lubonakala phezulu kuluhlu, kwaye nomxholo wakho uphakame kukhuphiswano.
Liqhinga elidumileyo elisetyenziswa ngamawaka-waka eakhawunti
I-YouTube sisixhobo esibaluleke ngolu hlobo kubarhwebi. Ukufumana ababhalisi bejelo kufana nokuthi abantu babhalise ukujonga iimveliso zakho yonke imihla. Ayisiyo-YouTube kuphela eyinxalenye ebalulekileyo yalo naliphi na icebo lokuthengisa kodwa ukufumana ababhalisi beSimahla bakaYouTube yenye yeemfihlo ezigcinwe kakuhle kushishino. Uya kumangaliswa linani leeakhawunti phaya ngaphandle ngabantu abangabhalisiyo kunye nabalandeli. Iimodeli, abaqhubi bobuhlanga, nkqu nabezopolitiko, bonke bababhalisile be-YouTube kwiiakhawunti zabo kwaye babukele ukuthandwa kwejelo labo kukonyuka phambi kwamehlo abo.
Uninzi lwethu lufumene ityala lesimahla le-Facebook ukusuka ku-Facebook. Yinto enye. Cinga ngokufumana abalandeli njengokunyusa isithuba kwi-Facebook, zombini ezi ndlela zisebenzayo zokwandisa ababhalisile. Umahluko kuphela kukuba, ukunyusa izithuba kwi-Facebook nakwezinye iisayithi kuyingozi kuba awuqinisekiswanga ngenani elithile labalandeli okanye nokuzibandakanya rhoqo.
Nyusa ingeniso yeshishini
Njengalo naliphi na ishishini, ufuna ukunyusa umgca wakho osezantsi. I-YouTube liqonga elifanelekileyo lokuguqula abathengi babe ngabathengi ngobomi bonke ngokwabelana ngeevidiyo ngophawu lwakho. Konke kukhokelela koku. Nababhalisi beSimahla bakaYouTube, ungakha oku kulandelayo ngokubalulekileyo kwishishini lakho. Ukusuka apho, iividiyo zakho zinokusasazeka nakwezinye iisayithi ezinjenge-Facebook, kwaye umi ithuba lokuya kwiintsholongwane; kwaye ukubhengeza uphawu lwakho kwizigidi zabathengi. Sijonge kwezinye izibonelelo ngokunjalo, kodwa sithini isizathu sokuba ukonyuka kwe-YouTube kubhaliso lwakho kuya kukhokelela kwingeniso yeshishini.
Mholo … yeyazimahla!
Amathuba sisihloko seli nqaku sibambe umdla wakho. Free YouTube kwababhalisele i nifumana inqabile, kodwa kukho iinkampani ubani obelapho uphume udela kude ababhalisele! Ezi ayizizo nje i-bots ezigaxekile kwiakhawunti yakho; Bangabasebenzisi bokwenyani abanokunceda ukongeza ubalo lwakho lwababhalisele kwaye ufumane ishishini lakho apho.
Ke oku kuthetha ntoni kwishishini lakho?
Into ethethwa nguSusan Wojcicki ngaphandle kwamathandabuzo iyinyani; I-YouTube inento kumntu wonke. Njengeshishini kwiYouTube, nangona kunjalo, ayonelanga ukuba yinto umntu , kuya kufuneka uzama ukuba yinto ye wonke . Nangona ingaqhelekanga, kuvakala ukuba i-YouTube ithandwa kakhulu kunethelevishini yenethiwekhi, kunye nentambo. Abasebenzisi baziva unxibelelwano olwahlukileyo neqonga kunye neendlela abazilandelayo ngenxa yokujonga okukufutshane kubo oko kubanika "ubomi" bemihla ngemihla beempawu. Ukufumana ababhalisi be-YouTube yasimahla yeyona ndlela ilungileyo yokutsiba-ukuqala ubukho bakho be-YouTube kwaye uvule iminyango yempumelelo kwishishini.
Fumana ababhalisi bakho MAHHALA beYouTube ngokukhawuleza kwaye uqale uhambo lwakho lodumo lwe-YouTube namhlanje!
27I ngoJuni 2022
Iingcebiso zokudala iividiyo ezinomsila omde ezinempembelelo kuYouTube
Ngokuqinisekileyo, iiShorts zikaYouTube zenza amaza kwimidiya yoluntu. Kodwa ngaba ubusazi ukuba uninzi lwabantu lujonga kuphela iividiyo ezinomsila omde? Ezi ziividiyo ezinde zikaYouTube,...
20I ngoJuni 2022
Isikhokelo sakho sokuQala isitishi sikaYouTube esiManyanisiweyo
Ijelo likaYouTube elihlangeneyo lisisitishi sikaYouTube seshishini. Ngelixa iYouTube ingohluli phakathi kwamajelo omntu kunye naweshishini, kukho izinto ezininzi onokuthi uzenze...
30th Meyi 2022
Zingaphi iithegi onokuthi uzisebenzise ukuze ubonakale ngcono kuYouTube?
I-YouTube ayiseyiyo iqonga lokusasaza ividiyo kwakhona - ikwayinjini yokukhangela. Ngapha koko, iqonga likaGoogle lesibini kuphela kuGoogle malunga nokukhangela ...
Apha kwa-SubPals, siyazingca ngenkonzo eyodwa kunye namaxabiso afikelelekayo. Sukuthatha nje ilizwi lethu ngayo - jonga uphononongo lwethu lwabathengi ngezantsi.
Ndingumyili womxholo, uncede kakhulu kuba i-Subpals yongeze ababhalisile kwisitishi sam rhoqo ngeeyure ezili-12.
Le webhusayithi ilungile ekukhuleni kwee-youtubers ezifuna inkuthazo. Ndiqale ngababhalisile abangama-80 kwaye ngoku ndina-500.
Bendijonge iingcebiso ezincinci zokufumana ababhalisile bejelo lam likaYouTube kwi-intanethi xa ndikhubeka kwi-SubPals kwaye bendinentlebendwane ngokwenyani, ndicinga ukuba iya kuba bubuqhetseba. Ngethamsanqa kwakungekho kwaye ndakwazi ukufumana ababhalisile abalishumi abalungileyo kwimizuzu embalwa! Ndincoma kakhulu, ukongezelela ungasebenzisa iinkonzo zabo simahla kanye ngosuku;)
Iwebhusayithi entle, ufumana ii-subs zasimahla. Kwaye ayinazo iintsholongwane. Intle kakhulu. Jonga le webhusayithi. NGOKU!
Inkonzo enhle kakhulu kwixabiso elikhulu, thanda imodeli esekelwe kubhaliso. Iimbono kunye ne-subs zi-organic.
Kuthatha malunga nesiqingatha seyure ukufikelela kwisicwangciso sasimahla, esikunika umyinge omncinci we-10subs rhoqo nge-12h, nangona kufuneka uyivule ngesandla. Iluncedo kubantu abatsha abanqwenela ukukhulisa ijelo labo le-yt. Isiza kulula ukuhamba.
Kuyo yonke i-YouTube yeewebhusayithi ezisezantsi phaya, ii-Subpals kufuneka zibe zezona zilungileyo, rhoqo ngeeyure ezili-12 ungagaya ababhalisile abali-10 into entle, ngokuqinisekileyo abanye abantu baya kuzikhupha, ngelishwa, yinto leyo iiwebhusayithi ezinje zingenakuthintela. , Ndikhe ndasebenzisa i-sub pals kwixesha elidlulileyo kwaye kumava am, yeyona ndlela ilungileyo yokufumana ababhalisile bakaYouTube.
Iyamangalisa ke ineenkxaso ezininzi kunye nezinto ezithandwayo azikholelwa ukuba le ndawo iyinyani kodwa isebenza kakuhle kakhulu.
- UAdam S.
Eyona nto ingcono kakhulu, inconywa kakhulu kuye wonke umntu. Sebenzisa iinkonzo zabo, ezimangalisayo ngokwenene. Ndifumana ii-subs kwitshaneli yam rhoqo..
Eyona ndlela yokufumana ababhalisile kwi-youtube ithathe ixesha kodwa iluncedo kwaye iyasebenza ndiyayicebisa!
Ababhalisi bayinyani esiyifumana kwi-subpals.com. Ndiyakucebisa ukuba usebenze kwi-subpals.com kunyuso lwesitishi sikaYouTube. Enkosi
inkonzo elungileyo. Isicwangciso sasimahla siyasebenza
Inkonzo entle kakhulu enceda ijelo lam likhule. Zininzi iiveki ezinikezelwayo ezimangalisayo ngokwenene.
Ijelo lam le-youtube i-JE Imposters lifumene ababhalisile abaninzi kwi-SubPals! Ndithumele iveki kuphela kwaye ndithanda ababhalisile abangama-30! Njengoko kuyamangalisa ukuba le ndawo isebenza ngokwenene kwaye ndiyincoma kakhulu
Ulunge kakhulu, ndivuya kakhulu ukuba yenze le nto ibiyikhuthaza! Bakunika i-subs kwimizuzu embalwa kwaye ibonakala ithembekile
iqonga elikhulu ngokukodwa kwabaqalayo!
Ndiyithanda kakhulu le webhusayithi. Ungafumana abanye ababhalisile basimahla nje ngokuthanda kunye nokubhalisa abanye abantu.
Oku kukhuseleke kakhulu ukusebenzisa njengoko bendiyisebenzisa iiveki ezimbini ngoku ngaphandle kwengxaki. ngoko ndicinga ukuba abantu abazama ukukhula ngokukhawuleza kufuneka bahambe kwaye basebenzise le ndawo
Intle kakhulu, i-100% icetyiswa, sebenza ngokugqibeleleyo, ukuba ufuna ukukhula, le yiwebhusayithi yakho. Ndincoma kuyoutube
- UMoses R.
Eyona webhusayithi ibalaseleyo! Ungazama kwakhona! Nje ukuba ufuna uncedo ngejelo lakho, oku kuyakunceda ngokupheleleyo!
Ndiziva ndonwabe kakhulu emva kokujoyina le webhusayithi. Kwaye ndincome ngale ndlela kuni nonke ukuba nizibandakanye apha.
Olu lusetyenziso olumangalisayo, lukunika ii-subs zasimahla! Ngokuqinisekileyo ungabacebisa kuba ezi subs zinokuba luncedo kakhulu.
Kugqwesileyo! Ufumana malunga nababhalisi be-15 rhoqo kwaye ulahlekelwe kuphela malunga ne-3. Ndahamba ukusuka kwi-9 ukuya kwi-30 kancinane kwiintsuku ze-2!
Khulisa ijelo lakho ngokulula ngokubhalisela nje abantu! Ndincoma kakhulu ukuba uzame oku! Awuyi kuzisola kwaye le ndawo inenkonzo entle kakhulu. Ukuba uthenga naluphi na umrhumo apha njengeshishini okanye enye into, uya kuba nodumo ngexesha nje elifutshane...
inkonzo Uvavanyo lweSiteshi seYouTube ($ 120)
inkonzo 1 I-YouTube yeVidiyo ye-SEO ($ 30) Iividiyo ezi-3 ze-YouTube ze-SEO ($ 80) Iividiyo ezi-6 ze-YouTube ze-SEO ($ 150) Iividiyo ezi-12 ze-YouTube ze-SEO ($ 280)
inkonzo Uyilo lweBhanari eyi-1 ($ 80) Uyilo lweThupha eliDala leVidiyo ($ 1) Uyilo lweThupha eliDala leVidiyo ($ 3) Uyilo lweThupha eliDala leVidiyo ($ 6)
Joyina ngaphezulu kwesigidi se-YouTubers abakhuthaza ngenkuthalo ijelo labo kunye nababhalisi be-YouTube basimahla!
... kunye nezinye ezininzi!
Ilungelo lokushicilela © 2022 SubPals (subpals.com). Onke Amalungelo Agciniwe. Sitemap
Ungawaphatha njani amagqabantshintshi ngoSpam kwiakhawunti yakho kaYouTube?
Amabango elungelo lokushicilela likaYouTube ngokuchasene noGqibo lukaYouTube